मल्टिप्लेक्सले पत्याउनै छाडेका हुन् नेपाली फिल्म ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
मल्टिप्लेक्सले पत्याउनै छाडेका हुन् नेपाली फिल्म ?
फिल्मी फण्डा । जेठ १७ गतेबाट प्रदर्शनमा कुम्भ कर्ण र काउसो पनि प्रदर्शनमा आएका छन् । कप्स र काउसोलाई काठमाण्डौको क्यूएफएक्स, बीग मुभिज जस्ता चलेका स्टेशनले शो नै दिएका छैनन् । कुम्भ कर्णलाई क्यूएफएक्सले ३ शोज् दिएको छ भने बीग मुभिजले २ शो दिएको छ । एफ क्युब र बीएसआरले भने कप्स र कुम्भ कर्ण दुवैलाई शो दिएको छ । अर्को फिल्म काउसोले भने मल्टिपेक्समा शो पाएको छैन । तीनै फिल्महरुलाई सिङ्गल थिएटरको भर पर्नुपर्ने भएको छ । तीनै फिल्महरु ६० लाख बराबारको लागतमा निर्माण भएको जनाइएको छ ।
कप्समा अनुपबिक्रम शाही , सन्दीपा लिम्बु, अमित गिरी, रामराज क्षत्री, अनुपमा भण्डारी, निरुता स्याङतान, सुन्दर श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । एक्शन तथा लभस्टोरी कथा मिश्रित फिल्म कप्समा प्राय खल पात्रको भूमिकामा देखिँदै आएका अनुप बिक्रम शाही प्रहरी नायब उपरिक्षकको भूमिकामा रहेका छन् । आर्या मुभिज र सारा श्री मूभिजले निर्माण गरेको फिल्ममा सुसन प्रजापतिको छायाँकन, बिपिन मल्लको सम्पादन, साम्राट सापकोटाको लेखन र कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ ।
फिल्म कुम्भ करणमा गौरव पहारी ,भोलाराज सापकोटा, निशा अधिकारी, अभय बराल, प्रमोद अग्राहरी, आकाश पाल, कुल्दिप अधिकारी लगायका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । दीपक ओलीको निर्देशनमा रहेको उक्त फिल्ममा गिरप्रसाद घर्ती मगर र विजय श्रेष्ठ फिल्मका सह निर्माता हुन् । महेश दवाडीको कथा, पटकथा तथा संवाद रहेको उक्त फिल्ममा हरि घले लामाको छायाँकन रहेको छ । आकाश पल इन्टरटेन्मेन्टको प्रस्तुतीमा तयार भएको उक्त फिल्ममा रोम ओली कार्यकारी निर्माताका रुपमा रहेका छन् भने क्षितिज बस्नेत, चुपनिधि रिजाल, चन्द्रबहादुर घर्ती मगर लगायतको लगानी रहेको छ ।
एकै दिनमा १ करोड ६० लाख बराबार लगानी भएको फिल्महरुले मल्टिप्लेक्स हलहरुमा शो कम पाउनु र पाउँदै नपाउनुमा फिल्म निर्माण युनिटले झुर फिल्म निर्माण गरेका हुन् ? हलहरुमा प्रदर्शन लायक फिल्म नभएर नै हलहरुले शो नदिएका हुन् । अभिनेता अनुप विक्रम शाही चल्तिका कलाकार हुन् । ब्युटी प्याजेन्ट देखि ठुला ब्यानरसम्म उपस्थिति रहेको छ । के अब अनुपलाई पनि मल्टिप्लेक्सले पत्याउँदै छाडेका हुन् ?